Condo for Sale in Ahlone - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Condos for Sale in Ahlone
အလုံ ၊ Paragon Residence
အလုံ ၊ Paragon Residence ကမ်းနားလ...
Ad Number S-10159417
အလုံမြို့နယ်တွင် အိပ်ခန်း(၃)ခန်းပါ (2380Sqft) Time မင်းရဲကျော်စွာကွန်ဒို အခန်းသန့် ရောင်းရန်ရှိ...
အလုံ၊ Time မင်းရဲကျေ...
Ad Number S-10158335
အလုံ၊River View Point Condo
အလုံ၊River View Point Condo (1782 Sqft)M-1,B-2 (ပြင်ပြီး...
Ad Number S-10155574
Ad Number S-10155547
💥 မြို့ထဲနဲ့လဲနီး လမ်းသင့် သွားလာရလွယ်ကူသော #အလုံမြို့နယ်ရှိ River View Point Condominium အလွှာမြင့် အခန်း...
Ad Number S-10176000
(3100 sqft)အကျယ် ၊မင်းရဲကျော်စွာလမ်းကွန်ဒို ၊အလုံမြို့နယ် တွင် ရောင်းရန်ရှိ
Ad Number S-10173982
River View Point အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုတွင် အခန်းရောင်းရန်ရှိသည်
Ad Number S-10173095
Ad Number S-10173054
အလံု ေရႊဇဗၺဴဒိပ္ကြန္ဒိုတြင္ အဆင္ျမင့္ျပင္ဆင္ၿပီး အခန္းေရာင္းမည္
Ad Number S-10172822
မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းမေပၚ Time Min Ye Kyaw Swar Condo တြင္ 1 sqft 2.7 Lျဖင့္ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းေရာင္းမည္
6,450 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10171536
(2245sqft)အကျယ်၊ အလုံ၊ ရွှေဇမ္ဗူဒိပ်ကွန်ဒို ရှိ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိ
09252588441, 09252588440, 09252588442, 09252588443
Ad Number S-10169607
(2200sqft)အကျယ်၊ အလုံ၊ River View Point Condo ရှိ အလွှာမြင့် ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိ
Ad Number S-10169278
အလုံမြို့နယ်ရှိ ရန်ကုန်မြစ်ရှုခင်းကို အပြည့်အဝခံစားရရှိနိုင်သော Royal Sin Min Condo ရောင်းမည်😇
Ad Number S-10167709
Ad Number S-10167583